torque ac torque motor, dc torque motor, qiimaha gawaarida torque
info[emailka waa la ilaaliyay]
torque ac dc torque motor qiimaha ugu fiican iibka
Iibso matoor aad u sarreeya isla markaana hadda si bilaash ah uga soo dhoofso
Tooska Tooska Tooska ah ee Motors
Toos Tooska Tooska ah
Matoorrada Xuddunta waa matoorrada xirmooyinka aan xaddidneyn oo ka kooban rotor-magnet joogto ah iyo stator dahaaray. Actuall-kaaga wuxuu u maleynayay inuu miisaankaaga curyaaminta ku miisaamayo Tesla Model S.
Torque dc motor sare
Matoorrada Xuddunta ayaa si weyn uga faa'iideystay aqoonta ay ka heleen samaynta matoorrada toosan. Motors-yada waa nooc gaar ah oo matoorro iskudhafan oo magnet joogto ah.
Saddex Wajiga TEFC Torque Motors
Mashiinka Xuddunta waa mootada EC, ama si kale haddii loo dhigo waa AC AC aan burush lahayn. Gaar ahaan, waxaa jira laba nooc oo matoorro mashiinno wadis toos ah wata ah. Saddex Waji TEFC Joogtada Xuddunta Laba Xawaare Motors.
Awoodda sare ee cufnaanta awoodda matoorrada aan cillad lahayn
Awoodda cufnaanta sare ee matoorrada bilaa burushka ah, Waxqabadka sare ee bilaa booska biraha aan lahayn ee birta BLDC koronto-dhaliyeyaasha & matoorrada oo leh awood aan horay loo arag & cufnaanta cufnaanta, jilicsanaanta & waxtarka.
Gawaarida Sare ee Sare ee Ganacsiga iyo Warshadaha Warshadaha Qiimaha Ugu Wanaagsan Shiinaha
Soo Saarista matoorrada sare ee Sogears
Waxaan bixinaa alaab tayo sare leh, oo qiime jaban leh. Gawaarida torque waa nooc gaar ah oo ah matoor koronto oo si joogto ah u shaqeyn kara. Sannado badan oo waayo-aragnimo ah oo soo saarista gawaarida ah ayaa ah inay ku siiyaan matoor tayo sare leh oo waara. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid waad nala soo xiriiri kartaa, waan ku faraxsanahay inaan ku caawino!
Wax dheeraad ah naga baro
Noo soo dir Baadhitaan?
Fadlan xor u tahay inaad nala soo xiriirto.